galmudugnews.com » Ciidamada Galmudug oo toogtay afar ka mida Maleeshiyada Qaybdiid-Afduub
Home » WARARKA » Ciidamada Galmudug oo toogtay afar ka mida Maleeshiyada Qaybdiid-Afduub Ciidamada Galmudug oo toogtay afar ka mida Maleeshiyada Qaybdiid-Afduub admin on
Apr 10th, 2013 //
No Comment Views 164566Dagaal la isu adeegsaday hubka fudud ayaa koofurta Galkacyo ku dhexmaray Ciidamada amaanka Galmudug State iyo Maleeshiyo taabacsan hogaamiye kooxeedka Cabdi Qeybdiid.
Ciidamadda amaanka Galmudug ayaa dhaawacay afar ka mida Maleeshiyadda Qeybdiid,waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen 11 ka mida Maleeshiyadiisa .
Dagaalka ayaa dhacay kadib markii Maleeshiyadda Dagaal ooge Qeybdiid bilaabeen inay Ganacsatada Koofurta Galkacyo ka qaadaan lacago baada taas oo loogu magacdaray Canshuur.
Maleeshiyadda Qeybdiid ee nolosha lagu qabtay ayaa lagala wareegay Waraaqihii Canshuur ku sheega iyo wixii ay lacag wateen kadibna waa la sii daayay.
Dagaal ooge Qeybdiid oo wata Baabuurta dagaalka ayaa isku dayay inuu Ciidamadda amaanka xoog ku maquuniyo hasse yeeshee wuxuu si deg dega uga soo laabtay Jiida dagaalka kadib markii tacshiirad xoogan la huwiyay.
Qeybdiid oo bilahii la soo dhaafay Galmudug ka waday afduubyo iyo dilal qorsheysan ayaa xalay afduubtay Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Galmudug State Khaliif Sheekh Xuseen.
Dagaal ooge Qeybdiid wuxuu afduubkiisa u adeegsaday Mooryaan la heyba Wasiirka.wuxuuna hore u afduubtay Duqa Magaaladda Galkacyo ee Maamulka Galmudug Marwo Shukri Cabdi Ciise.
Maamulka Galmudug wuxuu hoosta ka xariiqayaa inuu dhamaaday dulqaadkii sidaas darteed la qaadi doono tilaabooyin Melleteri si looga hortagi falalka guracan ee Dagaal ooge Qeybdiid iyo Maleeshiyadiisa ka wadaan Galmudug.
Maamulka Galmudug wuxuu hoosta ka xariiqayaa inaan Masuuliyiinta la afduubtay loogu qiil sameeyn karin waxaa afduubtay beeshooda maxaa yeelay waxay ka tirsan yihiin maamulka.
Maamulka Galmudug wuxuu beesha Caalamka iyo Hay”adaha xaquuqul insaanka ku wargelinayaa inay si mugleh ula socdaan tacadiyada dagaal oogey Qeybdiid ka wado Galmudug.
By Dahir Abdulle Alasow
Wasiirka Warfaafinta,CIyaaraha iyo Dhalinyarada Galmudug State of Somalia.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139536 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31888 hitsContact US - 30598 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26165 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25649 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25283 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23902 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23054 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22398 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22374 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21469 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21129 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21129 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20827 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19886 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19880 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19275 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18515 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17824 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17752 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17686 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16906 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16832 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15539 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15489 hits Home Contact US